Uyenza njani imifanekiso yeDuotone Effect kwiPhotoshop | Abadali be-Intanethi
Njengabayili, nini Ukusebenzisa iifoto kwiiprojekthi zethu zoyilo, siqhele kakhulu ukuhlela kunye nokuzibamba kwakhona, ukusebenzisa izihluzi ezahlukeneyo kunye neziphumo kuzo ukubanika imbonakalo enomtsalane ngakumbi.
Iinkqubo zokuhlela ifoto zisinika intaphane yeendlela esinokuzisebenzisa kwimifanekiso yethu, ukusuka kwizihluzi ezimnyama nezimhlophe, ukuqaqamba kunye nohlengahlengiso lokuthelekisa, izihluzi zemibala, njl.
Malunga nokugqibela, malunga nezihluzi zemibala, yinto esiza kuthetha ngayo namhlanje kule post, ngakumbi malunga nomzobo wegraphic oye waba nefashoni malunga nonyaka ka-2017, isiphumo se-duotone.
siza kukufundisa Uyenza njani imifanekiso enefuthe le-duotone kwi-photoshop ukusuka ekuqaleni
1 Yintoni umphumo we-duotone?
2 Inyathelo ngenyathelo isiphumo duotone kwi Photoshop
Yintoni umphumo we-duotone?
Njengoko igama layo libonisa, yimifanekiso okanye iifoto apho kusetyenziswe imibala emibini eyahlukeneyo. Ivela kwinkqubo yokushicilela yendabuko ngee-inki ezimbini, ii-inki ezimbini kuphela ezisetyenziselwa ukunciphisa iindleko, kuba iipleyiti ezimbini kuphela eziyimfuneko kwaye zingekho ezine zemibala.
Kwilizwe lomzobo, kusetyenziswa ubuchule be-duotone, ukongeza kwiifoto okanye kwii-icon, ubuntu obuthile, ekubeni ingumyili onokukhetha imibala oza kusebenza ngayo.
Kodwa ayiyiyo yonke imifanekiso esiyibonayo esebenza ngokuchanekileyo ngobu buchule.. I-duotone isetyenziswe kakuhle kwimifanekiso elula, enjengomfanekiso, kodwa ngokungafaniyo okuphezulu kokukhanya kunye nesithunzi, ngoko umphumo ubonakala ngakumbi.
Inyathelo ngenyathelo isiphumo duotone kwi Photoshop
Enye yeendlela ezikhawulezayo nezilula zokudala esi siphumo kungenkqubo yokuhlela I-Adobe Photoshop, kuba ngenxa yezixhobo zayo sinokusebenza kwiitshaneli zemifanekiso kunye nohlengahlengiso lomaleko.
Into yokuqala ekufuneka sibe nayo ngaphambi kokuvula inkqubo ngumfanekiso esiza kusebenza ngawo, kwimeko yethu siya kusebenza kunye nomfanekiso wale nja enhle.
Akufuneki ukuba babe yimifanekiso kunye naziphi na iimfuno, kodwa Okukhona umahluko unomfanekiso onjalo, kokukhona isiphumo se-duotone siya kuba phezu kwawo.
Emva kokuba sinomfanekiso esiya kusebenza nawo, siya kuvula kwi-Photoshop, inyathelo elibalulekileyo kukuba iimaleko kunye neethebhu zetshaneli ezivulwe kudweliso lwenkqubo.
Ukuba asinazo, siyazivula, kulula kakhulu ukwenza, kufuneka siye kwi window tab kwaye sijonge umaleko kunye neenketho zetshaneli kwaye ucofe kuzo.
Kwiphaneli yamajelo, siboniswa ukuba umfanekiso esisebenza nawo uhlukaniswe imijelo emine eyahlukeneyo, kwelinye icala umfanekiso kwi-RGB, kunye nemijelo eyenzayo; obomvu, oluhlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka. Ukuba sicofa kuyo nayiphi na kuzo, siya kubona ukuba umfanekiso wethu utshintsha njani.
Eyona nto ibalulekileyo kweli nyathelo khetha isitishi esinganikezeli umahluko ongakumbi, ukwenzela ukuba xa usebenzisa i-duotone effect ibonakala ngakumbi. Olu khetho lwetshaneli lwahlukile kumfanekiso ngamnye, akukho namnye osebenza kuzo zonke iifoto.
Kwimeko yethu, ngumjelo ohlaza okwesibhakabhaka, lowo unganiki umahluko omkhulu. Ijelo esilikhethileyo kufuneka lilayishwe njengokhetho, oko kukuthi, kufuneka ucofe kwitshaneli kwaye kwangaxeshanye ubambe isitshixo solawulo kwikhibhodi yakho. Xa uthobela ezi zibonakaliso, umgca odayiweyo uvela kumfanekiso wethu.
Inyathelo elilandelayo kukuya kwipaneli yomaleko kwaye ukhethe ukhetho lohlengahlengiso lombala, emva koko, kwimenyu evelayo, khetha umbala ofanayo.
Ngokukhawuleza emva kokukhetha ukhetho lombala ofanayo, iwindow iyavula ukukhetha umbala. Umbala esiwukhethayo ngoku, iya kuba ngowokusetyenziswa kwiindawo ezikhanyisiweyo zefoto yethu.
Into esiyincomayo kukuba uzame imibala eyahlukeneyo de ufumane oyena uthanda kakhulu, ngaphandle kokuba sele ukhethe le mibala ngaphambili.
Kwimeko yethu, siza kusebenzisa ithoni emfusa, ekhangeleka ngolu hlobo. Emva kokuba sinombala okhethiweyo, kufuneka nje cinezela iqhosha lokwamkela phezulu ngasekunene.
Ngoku siza kuya sebenzisa umbala wesibini kwiindawo ezimnyama kunye nezithunzi zomfanekiso wethu. Ukwenza oku, sibuyela kumaleko kwaye ukhethe umaleko apho sinomfanekiso wethu wokuqala. Sivula kwakhona ukhetho lohlengahlengiso lwemibala, kwaye sibonisa umbala ofanayo kwakhona.
Ifestile iya kuvula kwakhona apho kufuneka sikhethe omnye umbala kule mimandla emnyama kunye nethunzi. Njengoko sibona, kwithebhu yeelayiti, entsha yenziwe ngalo mbala omtsha esiza kuwukhetha, kwimeko yethu ithoni eluhlaza okwesibhakabhaka.
Into enhle malunga nesi sixhobo kukuba, ngenxa yesizathu esithile, awuyithandi indlela imibala ekhethiweyo ekhangeleka ngayo ukudala umphumo we-duotone, inokutshintshwa. ngendlela elula kakhulu, kufuneka ucofe kabini umaleko wombala esifuna ukuwutshintsha. Ukucofa kabini akusivuli isikrini kwakhona ukukhetha umbala kwaye ukwazi ukuwutshintsha.
Ukuba ufuna ukuya kwelinye inyathelo ukuya phambili, unokongeza iziphumo zegradient kwimifanekiso yakho ye-duotone.. Kuya kufuneka utshintshe ukhetho ukusuka kumbala ofanayo ukuya kwimephu yegradient kwaye ulungelelanise ibhalansi phakathi kwemibala eyahlukeneyo.
Ngala manyathelo alula, uya kukwazi ukuba umfanekiso wakho ulungile ngesiphumo se-duotone kwi-Photoshop. Kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuba xa ukhetha itshaneli phakathi kwezi zintathu ukuba umfanekiso ubonisa thina; blue, obomvu okanye eluhlaza, kufuneka sikhethe lowo usinika umahluko ophawulekayo ngakumbi.
Ukuba usebenza ngemifanekiso eyahlukeneyo yewebhusayithi kwaye ufuna ukuba ibonwe njengeseti, isiphumo se-duotone sisitayela esiya kukuvumela ukuba ubadibanise.
Siyathemba ukuba esi sifundo sincinci siza kukunceda kwixesha elizayo okanye kwiiprojekthi zangoku. Njengoko kumaxesha amaninzi sikuxelela, unayo ibhokisi yezimvo ekhoyo ukuze usibuze nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso ngalo mbandela esiwujongileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uyenza njani imifanekiso yeDuotone Effect kwiPhotoshop